Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyado kamid ah Qowmiyada Caddaanka Irishka Ireland, Finishka Finland iyo Jaaliyada Nigerianka UK oo Soo Booqday Xafiiska Ogaden Community Denmark
Waxaa maanta ooy taariikhu tahay 24/02/2012, booqasho kuyimid xafiiska jaaliyada Soomaalida Ogadenya ee Copenhagen caasimada wadanka Denmark wafti kakooban 4 xubnood oo kakala yimid jaaliyado reer Yurub ah oo kala ah Jaaliyada Irsihka-Ireland, Jaaliyada Nigeria-UK & Jaaliyada-Finland.
Booqashadan ayaa hordhac u,ahayd siminaar aqoon iswaydaarsi ah oo laqaban doono haduu ilaahay yiraahdo inta udhaxaysa 2-8 April 2012. siminaarkan oo kadhicidoona Copenhagen-Denmark ayna kasoo qayb galidoonaan 3 wadan oo ree Yurub ah Ireland, UK & Finland iyo jaaliyada Soomaalida Ogadenya iyo ururka OYSU ee wadanka Denmark.
Siminaarkan oo soojireen ahaa, sanadkii tagay ee 2011 laguqabtay caasimada Dublin ee wadanka Ireland laguna martiqaaday jaaliyada Soomaalida Ogadenya, waxay jaaliyadu nasiib uyeelatay inay martigaliso siminaarka sanadkan.
Ujeedada ugu wayn ee kadanbaysa qabashada siminaarka ayaa ahayd:-
1- Sidii saaxiibo joogta ah loogu samayn lahaa qadiyada Soomalida Ogadenya isla markaana lookasban lahaa dhamaan bulshada caalamka ee jecel xorriyada iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha.
2- Sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga, tayada iyo xaalada guud ee dhalinyarada Soomaalida Ogadenya OYSU- Denmark.
3-Sidii looxoojin lahaa iskaashiga ururada bulshada ee kadhexeeya qawmiyadaha shesheeye iyo shacabka Soomaalida Ogadenya.
Iswaraysigii iyo falanqayn qotodheer kadib waxay waftigu aad uga maqsuudeen sidii qiimaha iyo sharafta lahayd ee gudiga maamulka jaaliyadu ay usoo dhaweeyeen iyo waliba qaabeeshinka guud ee muuqaalka xafiiska jaaliyada, waxayna amaan iyo bogaadin dheer usoo jeediyeen maamulka suuban ee jaaliyada Soomaalida Ogadenya ee Denmark.
Ugudanbayntii waxay waftigan reer Yurub ee booqashada kuyimid iyo maamulka jaaliyadu hoosta kaxariiqeen sidii kor loogu qaadi lahaa tayada dhalinyarada wadamada ay kasocdeen waftigan iyo ururka OYSU-Denmark, kulankana wuxuu kudhamaaday jawi aad uwanaagsan oo kor uqaaday dhamaan dadkii kasoo qayb galay.